Jennifer Kate Hudson (*12. Sebtembar 1981 Chicago, Illinois, USA) waa fanaan Maraykan ah, joornaal, haysta abaalmarin sharaf lehGrammy, Golden GlobeAbaalmarinta BritishkaBAFTAa Oscarloogu talagalay doorka filimka taageeraya. Bishii Sebtembar 2008 waxay guursatay tartanDavid Otungiyo bishii Agoosto 2009 waxay dhashay wiilkiisii ​​ugu horeeyay, David Daniel Otunga Jr.
Jennifer wuxuu ku dhashay 12. September 1981 ee Chicago, Illinois. Laga soo bilaabo carruurnimadeedii waxay u heesi jirtay riyadeeda. Ka hor dhagaystayaashii weynaa, waxay ku sameysey da'da toddoba marka ay ku heestay gollaha kaniisadda. Whitney Houston, Aretha Franklin, Patty LaBelle iyo Céline Dion waxay tixgeliyeen naqshadaha muusikada ugu weyn.
Dhibaatada qoyska ee 24 waxaa si aad ah u saameeyay nolosha Jennifer. 2008 October, marka William Balfour, ninkeedii hore ee walaasheed Julia, la dilay saddex xubnood oo ka tirsan qoyskeeda (hooyo, walaalkiis iyo Shaam) ee guriga carruurnimada ay Chicago.
Bishii Sebtembar 2008 waxay ku hawlanayd David Otway, oo bishii Agoosto ee sannadka soo socda, Jennifer waxay dhashay wiil magaciisu ahaa David Daniel Otunga jr.
Dadweynaha waxay ogaadeen 2004 inay tahay finalistaha taxanaha seddexaad ee tartanka orodka ee SingingIdol American. Inkasta oo loo tixgeliyey in ay jecel yihiin guusha, gu'gii toddobaad ayaa dhamaaday.
Bishii Nofeembar, 2006 waxay saxiixday heshiis Arista Records. 23. Febraayo 2007 ayaa ku dhawaaqday in ay dhamaystirtay jidka koowaad ee laga soo bilaabo albumkii ugu horeeyay ee soo socda.
Midda kowaad ee "Spotlight" waxaa sii daayay 10. Juun 2008. Wuxuu meeshiisii ​​ka qaatay 40 Billboard Hot Hot 100 sida #24 hal oo waxaanu ku biiray 20 Ingiriisi iyo Jaantuska Turkiga. Midda labaad, "Haddii Tani Ma Jeclaado," waxay keentay iyada #63 on Billboard Hot 100 iyo #37 ee shaxda UK Singles Chart UK. Asal ahaan, kan labaad wuxuu ahaa "My Heart", laakiin dilka naxariis darrada ah ee xubnaha qoyskooda ma dhicin. Sida midda sadexaad ee "Pocketbook" ee la sii daayay, laakiin sidoo kale waa la joojiyay. Ma uusan ku guuleysan taageerayaasha ama dhaleeceyn xirfadeed. Saddexaad oo kali ah ayaa ugu dambeyntii noqday sheeko "I Give It" (mararka qaarkoodna "I In To Give You").
30. Sebtember 2008 ayaa la sii daayay albaabkeeda ugu horeeyay ee cinwaankeedu yahayJennifer Hudson. Dunida, wuxuu helay jawaab celin wanaagsan. 2009 739 oo kaliya ayaa laga iibiyay US by 000 XNUMX. Gabaygan wuxuu sidoo kale siiyey saddexda musharax ee abaalmarinta Grammy Prestigious:
loogu talagalay heesida ragga iyo dumarka R &
for Best Singing R & B Performance in Duet - la Fantasy Barrino (song "Waxaan ahay Haweeneyda kaliya")
ee loogu talagalay qoraallada ugu wanaagsan R & B
Abaalmarintan waxaa loo qaaday Rugta ugu fiican ee R & B. Albaabka waxaa sidoo kale ku jira heesta "Dhamaan Dhamaan Jacaylka" - heesaha filimka Cinwaanka Magaalada.
Jennifer wuxuu sii daayay albaab cusub oo la yiraahdo "I Remember" ka dib saddex sano ka dib (21, 03, 2011). Albaabka waxaa loo magacaabay ka dib Jennifer wuxuu ogaaday wixii dhacay intii uu noolaa. heeso waa in ay u dhigmaan la aayaha of Fanaanada this cod weyn. On album this, ayay la soo shaqeeyay Ryan Tedder, author of song aan i soo xusuuso. Dheeraad ah, guddiga ka qayb R. Kelly (song Aad Ugu), Alicia Keys (song Angel, Love Everbody Baahiyaha, Ha eeg Down), iyo musikistada (song Angel, Everbody Baahiyaha Love) Rich Harrison (socdaan No One qeybiso Waxaad jeceshahay, waxaan ka helay Tani) iyo labada soo saare ka Norway - Stargate.
7. June 2009 wuxuu heestaa Michael Jackson Jackson's Mass.
10. August 2009 waxay dhashay wiilkeeda David Daniel Otung Jr., oo aabbaheeduna yahay ninkeeda David Otung.
Bishii Nofeembar 2005, Jennifer waxaa lagu tuuray filim fanka ahDreamgirls. Waxay abuurtay shaxda Effie White halkan. Waxay ka soo muuqatay xiddigaha sida Beyoncé Knowles, Eddie Murphy ama Jamie Foxx. Doorashadan, 2007 waxay heshay Oscar for Actor Taageerada Wanaagsan.
Bishii Diseembar 2007 ayaa ku ciyaaray Galbeedka Magaalada. Waxay ka shaqaysay kaaliye Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Waxa kale oo muuqday sawirro kale,Nolosha shinnida qarsoodi ahNeboXayawaanka la isku qurxiyo. 2012 ayaa ku dhalatay seddex dhacdo oo taxane ahburburin. 2015 wuxuu ku dhex jiray taxane muusikEmpire.